Air Radio, Studio Music ary fampiharana bebe kokoa maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Air Radio, Studio Music ary fampiharana bebe kokoa maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Sabotsy ihany amin'ny farany! Fahafinaretana re izany! Fahamarinana? Tsy haiko ny momba anao, fa ny marina dia niandry ny faran'ny herinandro aho. Ary miaraka amin'ny roa andro mialoha, ary be ny fotoana malalaka, farafaharatsiny mihoatra ny mahazatra antsika hatramin'ny Alatsinainy ka hatramin'ny zoma, dia fotoana mety indrindra hijerena ny App Store ka hahitanao fampiharana maimaimpoana ho an'ny fitaovana iPhone sy iPad.
Androany aho mitondra safidy ho anao lalao sy rindranasa izay andoavam-bola mahazatra, fa ankehitriny, ary izao ihany, dia azonao atao ny misintona maimaimpoana. Ny sary, mozika ary ny lalao sasany, saingy tadidio fa tsy maintsy maika ianao satria tsy fantatray hoe rahoviana no hifarana ireo fampiroboroboana ireo. Noho izany, raha tokony handany fotoana hisaina ianao dia ampidino ireo rindranasa heverinao fa mety hahaliana anao, ary ho hitan'i Lugo raha mitazona azy ireo ianao na tsia. Maimaimpoana izy ireo, ka tsy misy ho very ianao. Andao handeha any?
1 Studio Music Player | Equalizer 48 tarika + tononkira
2 Vector fanafihana
Studio Music Player | Equalizer 48 tarika + tononkira
Izany no fanolorana ny andro, ary raha tsy mino ahy ianao dia ho hitako rehefa manambara ny vidiny mahazatra aho. Studio Music Player | Equalizer 48 tarika + tononkira dia «mpilalao tokana» izay azonao atao henoy ny mozika ankafizinao amin'ny 'fomba tena hafa', toy ny hoe mampiasa headphone kalitao matihanina ianao.
"Ny feon-dohan-kasinao dia ho toy ny fitaovana studio matihanina" miaraka amin'ny a feo »antsipiriany, telo-refy ary feno. Ary izany rehetra izany dia noho ny fanitsiana avo lenta noforonina isaky ny fitaovana. […] Ilay mpilalao manana preset mihoatra ny 80 ho an'ny fitaovan'ny marika malaza samy hafa "na dia azonao atao aza ny" manavao ny lisitry ny preset avy amin'ny mpilalao ".
Ankoatr'izay, 'ny mpilalao dia misy a Equatoriale paragrafy 48 tarika, mamela anao hisafidy ny elanelam-potoana eo anelanelan'ny 20 sy 20.000 Hertz, ny sakany amin'ny bandy equalizer amin'ny laharam-potoana oktafà 0.1 - 2, ary ny haavon'ny (tombony) manomboka amin'ny -10 ka hatramin'ny 4 dB.
Santionany amin'ireo mampiavaka azy ireo fa tena am-pahatsorana, mamporisika anao aho hanandrana azy satria Studio Music Player | Equalizer 48 tarika + tononkira Izy io dia manana vidiny 49,99 euro mahazatra ary azonao atao maimaim-poana tanteraka izany.
Studio Music Player | Equatorie 48 tarika ho an'ny pro'smaimaim-poana
Ary raha mihaino ny mozika tianao amin'ny mpilalao vaovao anao dia azonao atao koa ny miala voly Vector fanafihana, sarotra lalao tetika napetraka eny amin'ny habakabaka izay tsy maintsy hiarovanao ny planeta Tany amin'ny fanafihana «karazana tsy fantatra».
Vector fanafihana Manana ny vidiny mahazatra 0,99 euro izy nefa izao azonao atao maimaimpoana zato isan-jato mandritra ny fotoana voafetra.
Heveriko fa tsy misy holazaina firy momba ity rindranasa ity, efa voalaza ao daholo ny anarany. amin'ny radio radio ho leo ianao amin'ny fihainoana onjam-peo avy amin'ny vazan'izao tontolo izao. «Maherin'ny 30.000 ny onjam-peo avo lenta, na inona na inona karazana sy fomba fanao. Mamorona lisitra tianao indrindra amin'ny tianao sy ny lalana. »
radio radio Manana ny vidiny mahazatra 0,99 euro izy nefa izao azonao atao maimaimpoana zato isan-jato mandritra ny fotoana voafetra.
«Mamorona sary mihetsika miaraka amin'ny sarinao manokana ary zarao ho Animated Gifs! Manampia sary fotsiny, mihodinkodina / mamaky / mampihetsika azy ireo ary avy eo dia tsindrio ny bokotra firaketana. Azonao atao ny mamindra tanana ireo zavatra eo amin'ny efijery na azonao atao ny mampiasa ireo sarimiaina fanao mahazatra ho an'ny sarimiaina mandeha ho azy. »
GifORama Manana ny vidiny mahazatra 0,99 euro izy nefa izao azonao atao maimaimpoana zato isan-jato mandritra ny fotoana voafetra.
MAHALOHIDY: aza adino fa ny tolotra sy fampiroboroboana izay nasehonay anao androany dia Fotoana voafetra. Avy amin'ny iPhone Actualidad, ary ankanavaka ny faningana, Ny hany tokana azonay antoka anao dia ny fampandehanana ireo tolotra amin'ny fotoana namoahanay ity lahatsoratra ity na izany aza, tsy fantatsika hoe mandra-pahoviana izy ireo no hihatra. Tsotra ny antony: ny orinasa mandroso saika tsy manambara ny vanim-potoana manan-kery amin'ny tolotra iray ary indraindray, rehefa manao izany izy ireo dia miteraka fisavoritahana ny fiovan'ny fotoana. Noho izany, raha liana amin'ny lalao maimaim-poana na fampiharana efa hitanao ianao dia ampidino izao, aza miandry intsony. SY raha tsy manana WiFi eo akaiky eo ianao, misy fikafika: ataovy mangatsiaka ny fampidinana raha vao manomboka izany fikitika ny kisary fampiharana mifanaraka amin'ny fàfana iPhone anao, toy izao azonao tohizana izany rehefa ao an-trano ianao ary tsy mandany ireny angona finday sarobidy sy sarobidy ireny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Air Radio, Studio Music ary fampiharana bebe kokoa maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Nintendo dia nahatratra 2,9 tapitrisa tao anatin'ny iray andro niaraka tamin'ny Fire Emblem
Apple manavao an'i Siri ho an'ny iOS, Mac, ary Apple TV miaraka amin'ny atiny Super Bowl 2017